उबंटु को लागी सब्मोनिक, वेब-आधारित मिडिया सर्भर Ubunlog
अर्को लेखमा हामी सब्सोनिकलाई हेर्नेछौं। यो एक हो मिडिया सर्भर नि: शुल्क, खुला स्रोत, वेब-आधारित। सब्सोनिक थियो जाभामा लेखिएको र यो कुनै पनि अपरेटिंग सिस्टममा चल्छ जुन जाभा भर्चुअल मेशिन समर्थन गर्दछ। यसले एकै साथ धेरै स्ट्रिमि clients क्लाइन्टहरूलाई समर्थन गर्दछ र कुनै पनि स्ट्र्यामेबल मिडियासँग उपयुक्त छ, त्यो हो जुन प्रसारित हुन सक्छ (एमपी 3, एएसी र ओग सहित)। सब्सोनिकले फ्लाइ रूपान्तरणलाई पनि समर्थन गर्दछ (सबैभन्दा लोकप्रिय मल्टिमेडिया ढाँचाहरूको प्लगइनहरू प्रयोग गरेर).
यो नि: शुल्क, क्रस-प्लेटफर्म वेब मिडिया स्ट्रीमर हो। सब्सोनिक एक हो नेटवर्कमा स्ट्रीमिंगका लागि मिडिया सर्भर। यो एक वेब आधारित संगीत स्ट्रीमर, पोडकास्ट रिसीभर, र जुकेबक्स हो जुन कहिँ पनि संगीतको मजा लिन प्रयोग गरिन्छ। यसले संगीत फाईलहरू र फोल्डरहरू साझेदारी गर्न पनि प्रदान गर्दछ।
1 सामान्य सब्सोनिक सुविधाहरू
2 उब्न्टु १..१० मा सब्सोनिक स्थापना गर्नुहोस्
3 ब्राउजरमा सबसोनिक सुरुवात गर्नुहोस्
सामान्य सब्सोनिक सुविधाहरू
हामीलाई अनुमति दिनेछ जहाँसुकैबाट हाम्रो संगीत सुन्नुहोस्। तपाईलाई चाहिएको सबै ब्राउजर हो।
वेब ईन्टरफेस बैंडविड्थ प्रतिबन्धित वातावरण र को लागी अनुकूलित छ कुशल नेभिगेसन ठूला संगीत संग्रह (को माध्यम बाट)सयौं गीगाबाइट).
पाठ खोजीले हामीलाई मद्दत गर्दछ हाम्रो मनपर्ने ट्र्याकहरू फेला पार्नुहोस् चाँडै।
हामीसँग छ हामीलाई कभर देखाउने सम्भावनाID3 ट्यागहरूमा सम्मिलित छवि सहित। यसले हामीलाई एल्बममा रेटिंगहरू र टिप्पणीहरू दिन पनि अनुमति दिनेछ।
हामी सक्षम हुनेछौं हाम्रो आफ्नै प्लेलिस्ट सिर्जना गर्नुहोस् र यसलाई साझा गर्नुहोस् अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग यदि हामी चाहन्छौं भने।
हामीलाई अनुमति दिनेछ प्ले कतार प्रबन्ध गर्नुहोस् (थप्नुहोस्, हटाउनुहोस्, पुन: व्यवस्थित गर्नुहोस्, दोहोर्याउनुहोस्, शफल, अन्डु गर्नुहोस्, बचत गर्नुहोस् वा लोड गर्नुहोस्)।
MP3, OGG, AAC र कुनै पनि अन्य ढाँचाहरूको समर्थन गर्दछ अडियो वा भिडियो HTTP मार्फत प्रसारित भयो.
ट्रान्सकोडिंग ईन्जिनले हानि र हानिविहीन ढाँचाहरूको विविधताका प्रसारण सक्षम गर्दछ फ्लाइमा एमपी to मा रूपान्तरण गर्नुहोस्.
कुनै पनि नेटवर्क सक्षम मिडिया प्लेयर को साथ काम गर्दछ। साथै समावेश फ्ल्यास प्लेयर निगमित
प्लेलिस्टहरू आयात र निर्यात गर्न सकिन्छ। M3U, PLS, र XSPF ढाँचाहरू समर्थित छन्। बचत गरिएका प्लेसूचीहरू पोडकास्टहरूको रूपमा उपलब्ध छन्.
कार्यान्वयन गर्नुहोस् SHOUTcast प्रोटोकल। मिल्दो खेलाडीहरू (Winamp, iTunes र XMMS सहित) वर्तमान कलाकार र गीत, अन्य मेटाडाटाको साथ देखाउनुहोस्।
को HLS भिडियो प्रसारण.
तपाईं हाम्रोमा सार्न सक्नुहुन्छ Chromecast र Sonos उपकरणहरू.
हामी सक्षम हुनेछौं पोडकास्टहरू डाउनलोड गर्नुहोस् एकीकृत पोडकास्ट रिसीभरको साथ।
हामी गर्न सक्छौं हाम्रो रेडियो र टेलिभिजन स्टेशनहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् अनलाइन
भन्नुहोस् कि यी सुविधाहरू केवल तपाइँको मा मात्र उपलब्ध छन् "Pro" संस्करण र ती मध्येका हामी तिनीहरूलाई केहि बेर गर्न प्रयास गरौं। तिनीहरूले गर्न सक्छन् सबै सुविधाहरू हेर्नुहोस् कि यो कार्यक्रम हामीलाई परियोजना वेबसाइट मा प्रदान गर्दछ।
उब्न्टु १..१० मा सब्सोनिक स्थापना गर्नुहोस्
स्थापना प्रक्रिया अघि, हामीले गर्नु पर्छ आवश्यक रेपो थप्नुहोस् टर्मिनलमा निम्न आदेशहरू कार्यान्वयन गरेर हाम्रो प्रणालीमा (Ctrl + Alt + T):
त्यसोभए तपाईंले गर्नै पर्छ भण्डारमा कुञ्जी थप्नुहोस् भर्खरै थपियो। उही टर्मिनलमा हामीले लेख्नुपर्नेछ:
अब हामी जाँदै छौं apt स्रोत अपडेट गर्नुहोस् उही टर्मिनलमा चल्दै:
अब हामी निम्न आदेश प्रयोग गरेर सबसोनिक स्थापना सुरू गर्न सक्छौं:
स्थापना पछि हामी सक्दछौं सेवा सुरु गर्नुहोस् निम्न आदेश प्रयोग गरेर:
स्थापनाको यो तरिका सबसोनिकको नयाँ संस्करण स्थापना गर्दैन, तर यदि तपाईं उनलाई प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुहोस्.
ब्राउजरमा सबसोनिक सुरुवात गर्नुहोस्
अब हामी हाम्रो ब्राउजर खोल्न गइरहेका छौं र url मा लेख्नुहोस् http: // स्थानीय होस्ट: 4040०XNUMX०। सब्सनिक लगइन पृष्ठ पर्दामा देखा पर्नेछ। को प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डको लागि पूर्वनिर्धारित लगइन प्रमाणिकरण हो व्यवस्थापक। यी प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र लगइन क्लिक गर्नुहोस्।
एक पटक हामीले प्रशासनमा पहुँच गरेपछि हामीले गर्नुपर्नेछ प्रशासक पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्.
त्यसका लागि तपाईले पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् र नयाँ पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्। बचत क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्.
बचत गरेपछि हामीले नयाँ प्रमाणपत्रहरू लग इन गर्नुपर्नेछ। त्यस पछि तपाईले गर्नु पर्छ मिडिया फोल्डर कन्फिगर गर्नुहोस्:
मिडिया फोल्डरहरू छनौट गर्नुहोस् र बचत विकल्प क्लिक गर्नुहोस्।
कन्फिगर गर्न अर्को चरण नेटवर्क हो.
तपाईंको URL लेख्नुहोस् (http://localhost:4040/index.view) लाई मनपर्दछ अनुकूलन यूआरएलनिम्न स्क्रिनशटमा देखाइए जस्तै। बचत क्लिक गर्नुहोस्।
समाप्त भएपछि तपाई सब्सोनिक स्वागत पृष्ठमा लगिन सक्नुहुनेछ। यद्यपि हामी उनलाई जान सक्छौं।
यससँग, सब्सोनिक स्थापना समाप्त हुन्छ। हामी अब प्रोग्राम प्रयोग गर्न सक्दछौं। यदि तपाईँ चाहानु हुन्छ भने यो कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे अधिक जान्नुहोस् यसको, तपाईं परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ सुरू गरिएको सेक्सन तपाइँको वेबसाइट बाट।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » उबंटुको लागि सब्सोनिक, वेब-आधारित मिडिया सर्भर
श्री डिमिसे भन्यो
समीक्षाको लागि धन्यवाद, म सबोनिक जाँच गर्दैछु र यो क्षणमा उत्तम काम गर्दछ।
श्री डेमिसेलाई जवाफ दिनुहोस्
ब्रिटिश डिस्ट्रो फेरेन ओएस अद्यावधिक गरिएको छ